Nnụnụ Anya Ubi Ntanụ 800G (Iceland) | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Birds Eye Garden Peas 800G (Iceland)– Ordrs
Nnụnụ Eye Garden Peas 800G (Iceland)
Otu nri 80g nke Nnụnụ Anya Peas na-enye otu n'ime ụzọ ise gị na-atụ aro kwa ụbọchị nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Site na Mkpụrụ ruo na efere, agwa peas na ịhụnanya naanị site na nnụnụ anya ihe karịrị afọ 5 ka anyị raara onwe anyị nye na-eto eto peas kachasị ụtọ. Anyị esoro ọgbọ atọ nke ndị ọrụ ugbo rụọ ọrụ iji wulite ihe ọmụma, agụụ na nlekọta dị mkpa iji mepụta agwa zuru oke. Ndị ọrụ ubi anyị enyela aka zụlite ụdị pụrụ iche asatọ pụrụ iche a na-egbute n’ụbọchị mgbe ha kacha mma. Mgbe ahụ, anyị ga-ahụ na peas anyị niile na-ajụ oyi n'ime awa 70 8/2 iji jide ndụ ha. Lovehụnanya na nlezianya a niile na-abanye n'ime Osimiri Ubi anyị. Peas anyị Garden bụ isi iyi nke Vitamin C na ọgaranya isi iyi nke na-eme ka ha dị ukwuu maka usoro mgbochi gị * yana maka akwara gị ** * Vitamin C na - enye aka na ọrụ nkịtị nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ akwara akwara. Tendertọ dị nro. Isi mmalite nke vitamin C. Na ịhụnanya. 1 nke 2 otu ụbọchị servings. Enweghị agba agba, ihe ụtọ ma ọ bụ ihe nchekwa. Nnụnụ Anya.